ထာ၀ရဘုရား၏ အစေခံကျွန် ဝေဒနာခံခြင်းနှင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်း | The Suffering and Triumph of God’s Servant! | Real Conversion
ထာ၀ရဘုရား၏ အစေခံကျွန် ဝေဒနာခံခြင်းနှင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်း
(ဟေရှာယ ၅၃ ထဲက ဒေသနာအမှတ်စဉ် ၁)
၂၀၁၃၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်
၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
“ကြည့်ရှုသော။ ငါ့ကျွန်သည် အမှုဆောင်၍ အောင်လိမ့်မည်။ ချီးမြှင့်ခြင်းသို့ ရောက်၍ အထွက်အမြက် ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူသည် လူမဟုတ်သကဲ့သို့ မျက်နှာပျက်ခြင်း၊ လူသားမဟုတ်သကဲ့သို့ အဆင်းအသေရေ ပျက်ခြင်းရှိသည်ကို အများသောသူတို့သည် အံ့ဩမိန်းမောကြသည်ဖြစ်၍၊ ထို့အတူသူသည် အများသော သူတို့ကို သန့်ရှင်းစေလိမ့်မည်။ ရှေ့တော်၌ ရှင်ဘုရင်တို့သည် မိမိတိုနုတ်ကို ပိတ်၍နေရကြလိမ့်မည်။ သူတပါးမပြဘူးသော အရာကို သူတို့သည် မြင်ရကြလိမ့်မည်။ မကြားဘူးသော အရာကိုလည်း နားလည်ကြလိမ့်မည်”(ဟေရှာယ ၅၂း၁၃-၁၅)။
ကျေးဇူးပြု၍ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ဆက်လက်၍ ဖွင့်ထားကြပါ။ ခေတ်သစ်ကျမ်းစာအနက် ပြန်သူ၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်ဂီးလ် “ကြီးမြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်”က အထက်ပါကျမ်းပုဒ်သည် အခန်းကြီး၅၂၌ သာမက အခန်းကြီး ၅၃ အထိ အကျူံးဝင်ရေးသားဖော်ပြထားသင့်ပါသည်ဆို၏။ (Frank E. Gaebelein, D.D., The Expositor's Bible Commentary, Regency Reference Library, 1986, volume 6, p. 300).
ကျမ်းပုဒ်ငယ် ၁၅မှ အခန်းကြီး၅၂၊ အငယ်၁၂အထိသည်၊ ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်၏ဝေဒနာကို ရည်ညွန်းဖော်ပြထားပါသည်။ မက်သရူးဟင်နရီပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
၎င်းပရောဖက်ပြုချက်သည်၊ ဖော်ပြပါကျမ်းပိုဒ်မှစ၍ နောက်အခန်းကြီးအထိ၊ သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ကို ရည်ညွန်းဖော်ပြနေပြီး၊ ၎င်းသည် မေရှိယဘုရင်နှင့်ပါတ်သတ်၍ ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ် သည်ကို ရှေ့ခတ်ဂျူးလူတို့နားလည်ထားကြသည်၊ ခေတ်သစ်ဂျူးပညာရှင်များက ၎င်းအနက် အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောင်းလဲပစ်ကြ၏။ သို့သော် ဖိလိပ္ပုက (၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို) ယေရှု၏အကြောင်း တည်းဟူသော ဧဝံဂေလိစကားကို “ပရောဖက်ကြီးက ဟောကြားခြင်း” ဖြစ်ပြီးပြီး အဘယ်မည် သောသူကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဟု ဟောကြားခဲ့ပါသည်၊ တမန်တော် ၈း၃၄-၃၅)၊ (Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, Hendrickson Publishers, 1996 reprint, volume 4, p.. 235).
ရှေးခေတ်ဂျူး၊ တာရုန်ပြောကြားသည်မှာ၊ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် မေရှိယဘုရင်ကို ရည်ညွန်းသည်ဆို၏။ ရေ့Sကျသောဂျူးပညာရှင်တို့ဖြစ်သော အေဘန်ဧဇရနှင့်အလ်ရှက်စ်တို့နှင့် အတွေးအမြင်တူနေကြသည်။ (John Gill. D.D. An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, p. 309).
ခေတ်အဆက်ဆက် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး အနက်ပြန်ဆရာကြီးတို့က ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် သခင် ယေရှုနှင့်ပါတ်သတ်၍ ပရောဖက်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သဘောတူအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ စပါဂျန် ပြော ကြားခဲ့သည်မှာ၊
မည်သို့သောအားဖြင့် အခြားသောအရာကို ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်မည်နည်း? ပရောဖက်ကြီးက မည်သို့သောသူကို ရည်ညွန်းဖော်ပြခြင်းနည်း? နာဇရက်မြို့သား၊ ဘုရားသခင်၏သားတော် သည် အမှောင်ဆုံးသော ညနက်သန်းခေါင်ချိန်၌သာ ၎င်းဝေဒနာကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်ကို ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သုံးပိုဒ်၌ ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ဖော်ပြရည်ညွန်းနေခြင်းဖြစ်သည်ကို သံသယရှိစရာမလိုပါ။ (C. H. Spurgeon, “The Sure Triumph of the Crucified One,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XXI, p. 241).
မက်သရူးဟင်နရီ ရေးသားဖော်ပြထားသကဲ့သို့၊ ဧဝံဂေလိဆရာ ဖိလိပ္ပုပြောကြားသည်မှာ၊ ၎င်းကျမ်းမြတ်တော်က ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဝေဒနာကို ကြိုတင်ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
“ထိုအမတ်ကလည်းပရောဖက်သည် အဘယ်သူကို ရည်မှတ်၍ ဤသို့ဆိုလိုပါသနည်း? မိမိကိုယ်ကို ဆိုလိုသလော့။ သူတပါးကို ဆိုလိုသလော့ဟု ဖိလိပ္ပုအား မေးမြန်းလျှင်၊ ဖိလိပ္ပုသည် မိမိနုတ်ကို ဖွင့်၍ ထိုကျမ်းကို အစွဲပြုလျှက် ယေရှု၏အကြောင်းတည်းဟူသော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောလေ၏”။ (တမန်တော် ၈း၃၄-၃၅)။
ရှေ့ခေတ်ပညာရှင်တာရုန်၊ ရှေ့အကျဆုံးဂျူးကျမ်းတတ်များ၊ ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာ ဖိလိပ္ပုနှင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ကျမ်းစာအနက်ပြန်ဆရာကြီးတို့ထက်သာလွန်သော ဖော်ပြချက်များကျွန်ုပ်တို့နှင့်ရှိ မည် မဟုတ်တော့ပေ။ အထက်ပါကျမ်းပုဒ်၌ ဖော်ပြပါကျမ်းစကားတခုချင်းစီတိုင်းသည် မေရှိယသခင် ယေရှုခရစ်တော်ကို ရည်ညွန်းဖော်ပြထားပါသည်။
၁။ ပထမ၊ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ဆောင်သူ ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါ သည်။
အပုဒ်ငယ် ၁၃၌ အဖခမည်းတော် နုတ်ထွက်စကားဖြစ်သည်၊
“ကြည့်ရှုလော့၊ ငါ့ကျွန်သည် အမှုဆောင်၍အောင်လိမ့်မည်၊ ချီးမြှင့်ခြင်းသို့ရောက်၍ အထွက် အမြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၂း၁၃)။
ထာ၀ရဘုရားက၊ ကျွန်ုပ်တို့အား သူ့၏ “အစေခံကျွန်” ကို ကြည့်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်၊ ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ဆင်းသက်လာသောအခါ၊
“မိမိအသရေကိုစွန့်၍ အစေခံကျွန f၏သဏ္ဌာန်ကို ယူဆောင်လျှက်၊ လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ ဖွား ခြင်းကို ခံတော်မူ၏” (ဖိလိပ္ပိ ၂း၇)။
ဤကမ္ဘာလောက၌ ဘုရားသခင်၏ကျွန်သည် အမှုဆောင်ရွှက်၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရား မိန့်တော်မူခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်သမျှသည် ပြီးမြှောက်အောင်မြင်မည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရား မိန့်တော်မူခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်သမျှသည် ပြီးမြောက်အောင်မြင်မည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် သူတော် ဖြစ်စဉ်တွင်၊ ဗိမာန်တော်၌ရှိနေစဉ် ဂျူးပညာရှင်များက အံ့ဩမိန်းမောတွေဝေကြ၏။ နောက်တွင် ဖါရိရှဲနှင့်ဇန္ဒုကဲတို့က ယေရှု၏အမေးကို မဖြေနိုင်ကြ။ ပိလတ်မင်းနှင့်ရောမအာဏာရှင်များ နုတ်ပိတ်လျှက် ရှိရစ်ကြ၏။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန် စပ်လျှန်း၍၊
“ငါ့ကျွန်သည် အမှုဆောင်၍ အောင်လိမ့်မည်။ ချီးမြှင့်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၂း၁၃)။
ခေတ်သစ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာ၌၊ “ထရူအးကခြင်း”၊ မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ချီးမြောက်ခြင်းဟူ၍ သုံးနုန်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ “ခရစ်တော်ဘုရား၏ ချီးမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ ဖိလိပ္ပိ ၂း၉-၁၁၊ နှင့်တမန်တော် ၂း၃၃၌ ဖော်ပြထားချက်များကို စိတ်နှလုံးသားထဲ အသံသတိရှိရှိဖတ်ကြားဖို့လိုပါသည်။” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, p. 336).
“ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်ကို အလွန်ချီးမြောက်၍ ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက် ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမတော်ကို ပေးသနားတော်မူ၏” (ဖိလိ ၂း၉)။
“ထိုယေရှုကို ဘုရားသခင်ပြန်ရှင်စေတော်မူသည်ကို ငါတို့ရှိသမျှသည် သက်သေဖြစ်ကြ၏။ ထိုသို့ဘုရားသခင်သည် လက်ျာလက်တော်နှင့် ချီးမြင့်တော်မူသဖြင့် ထိုသခင်သည် ကတိ တော်နှင့်ယှဉ်သော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခမည်းတော်ထံ၌ ခံပြီဖြစ်၍၊ သင်တို့ကြားရ သောအရာကို သွင်းလောင်းတော်မူ၏” (တမန်တော် ၂း၃၂-၃၃)။
“ကြည့်ရှုလော့။ ငါ့ကျွန်သည် အမှုဆောင်၍ အောင်လိမ့်မည်။ ချီးမြင့်ခြင်းသို့ ရောက်၍ အထွက်အမြက်ရှိလိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၂း၁၃)။
ချီးမြောက်ခြင်း-ထမြောက်ခြင်း၊ ချီးကျူးခြင်း-ချီးမြှင့်ခြင်း၊ အမြင့်ဆုံး-ချီးမြောက်ခြင်းဟူ၏။ ဤတွင် ခရစ်တော်ဘုရား၏အမြင့်ဆုံး၌ ချီးမြင့်ခြင်းကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်! ကိုယ်တော် သည် အထက်ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ရူအးကမူခဲ့သည်! ယခုတွင် ကိုယ်တော်သည် အဖခမည်းတော်၏ လက်ျာတော်၌ စံပယ်တော်မူပြီဖြစ်သည်! ချီးမြောက်ခြင်း၊ ထမြောက်မူခြင်း! ချီးကျူးခြင်း-ချီးမြင့်ခြင်း!၊ အလွန်မြင့်သော အဖခမည်းတော်၏ လက်ျာတော် ဘက်၌ စံပယ်ခြင်းဖြစ်သည်၌! အာမင်!
“အမှုပြီးပြီ” ဟူ၍ ကြွေးကြော်
(၁၈၃၈-၁၈၇၆ ခုနှစ် ဖိလိ၊ ပီပလစ်သီကုံးသော “အံ့ဖွယ်ကယ်တင်ရှင်!”
“ကြည့်ရှုလော့၊ ငါ့ကျွန်သည် အမှုဆောင်၍အောင်လိမ့်မည်။ ချီးမြင့်ခြင်းသို့ ရောက်၍ အထွက်အမြက်ရှိလိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၂း၁၃)။
ယေရှုသည်အစဉ် အဖခမည်းတော်၏အစေခံကျွန်ဖြစ်၏၊ သားတော်ဘုရား သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်မူပြီ၊ အထက်ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ရူအးကတော်မူပြီး အဖခမည်းတော်၏လက်ျာတော်ဘက်၌ စံပယ်တော်မူပြီ! ဟာလေလုယာ! အံ့ဖွယ်ကယ်တင်ရှင်!
၂။ ဒုတိယ၊ ဃရစ်တော်သည် အပြစ်အတွက် မိမိကိုယ်ကို အပူဇော်ခံသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ ရပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အပိုဒ်ငယ် ၁၄ကို အသံကျယ်ကျယ်ဖတ်ကြစို့!
“သူသည် လူသားမဟုတ်သကဲ့သို့ မျက်နှာပျက်ခြင်း၊ လူသားမဟုတ်သကဲ့သို့ အဆင်းအသရေ ပျက်ခြင်းရှိသည်ကို အများသောသူတို့သည် (အံ့ဩ) မိန်းမောတွေဝေသည်ဖြစ်၍” (ဟေရှာယ ၅၂း၁၄)။
ဒေါက်တာယန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အစေခံကျွန်သည် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ် ရိုက်နှက်ချက် များကြောင့် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ရုပ်ဆင်းပျက်ခြင်းသည် လူတဦးခံရမည့် ဝေဒနာထက် နိုင်းယှဉ်၍ မရသောဆိုးရွှားစွာ ခံနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ဆင်းပျက်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးနှင့်မတူအောင် ပျက်စီးနေမည်ကို ဖော်ပြနေသည်။ ၎င်းသည် နှိုင်းဖွယ်မရှိကြီးစွာသော ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်သည်” (ibid., pp. 337-338)
ယေရှုသည် လူမဆန်သော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်း တကယ်ကို ခံခဲ့ရပါသည်။ အသေမခံမှီည၌ “ပြင်းထန်သော ဝေဒနာ”ကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။
“ပြင်းစွာသော ဝေဒနာကို ခံလျှက်အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက် တော်မူသည်ကား မြေပေါ်၌ ကျသောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ ဖြစ်သတည်း” (လုကာ ၂၂း၄၄)။
၎င်းဝေဒနာကို ကိုယ်တော်အဖမ်း မခံမ SDက ခံစားခဲ့သည်။ အမှောင်ဖုံးလွမ်းသော ဂေသရှေမန်ဥယာဉ်၌၊ သင့်အပြစ် ခရစ်တော်အပေါ် စီရင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရောမစစ်သားများက ကိုယ်တော်အား ဖမ်းဆီးသောအခါ ကိုယ်တော်ကိုယ်သည် ချွေးများစိုရွှဲ့နေပြီဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ကိုယ်တော်ကို ခေါ်ဆောင်သွားကြပြီး မျက်နှာတော်ကို ရိုက်ပုတ်ထိုးနှက်ခဲ့ကြသည်။ ပရောဖက်ကြီးက အစေခံကျွန်၏ ဝေဒနာကို ဤသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ရိုက်သောသူတို့အား ငါ့ကျော့ကို၎င်း၊ မုတ်ဆိတ်ကိုနုတ်သောသူတို့အား ငါ့ပါးကို၎င်း ငါအပ်၏။ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့် တံတွေးထွေးခြင်းမှ ငါသည်ကိုယ်မျက်နှာကိုမလွဲ” (ဟေရှာယ ၅ဝး၆)။
ရှင်လုကာပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “မျက်နှာတော်ကို ဖုံးပြီးလျှင် လက်နှင့်ပုတ်လျှက်” (လုကာ ၂၂း၆၄) ဟုပြောခဲ့သည်။ ရှင်မာကု ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ပိလတ်မင်းက “ယေရှုကိုရိုက်ပြီးလျှင်” (မာကု ၁၅း၁၅) ဟုဆိုလိုပါသည်။ ရှင်ယောဟန်ပြောကြားသည်မှာ၊
“ထိုအခါ၊ ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကိုယူ၍ ရိုက်ပြီးမှ၊ စစ်သူရဲတို့သည် ဆူးပင်နှင့်ရက်သော ဦးရစ်ကို ခေါင်းတော်၌တင်၍၊ ခရမ်းရောင်ဝတ်လုံနှင့် ခြုံစေပြီးလျှင်၊ ယုဒရှင်ဘုရင်ကိုယ်တော် သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း ဟုဆို၍ ရိုက်ပုတ်ကြ၏” (ယောဟန် ၁၉း၁-၃)။
ထို့နောက် သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏လက်ခြေတို့နှင့်သံမှိုစွဲရိုက်လျှက် ကားတိုင်၌ မြောက်ထားကြ၏။ ဒေါက်တာယန်း ပြောပြီးသကဲ့သို့၊ “ရိုက်ဆင်းပျက်ခြင်းသည် လူတဦးနှင့် တုနှိုင်းဖွယ်မရှိ ကြီးစွာသော ဆင်းရဲခြင်းကို ကိုယ်တော်အပေါ်၌ ဖြစ်စေသည်” ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (ibid., p. 338).
“သူသည်လူမဟုတ်သကဲ့သို့ မျက်နှာပျက်ခြင်း၊ လူသားမဟုတ်သကဲ့သို့ အဆင်းအသ ရေပျက် ခြင်း၊ ရှိသည်ကို အများသောသူတို့သည် အံ့ဩမိန်းမောကြသည်ဖြစ်၍” (ဟေရှာယ ၅၂း၁၄္ထ)။
ယနေ့ခေတ် ပန်းချီဆရာများဖြစ်ကြသော မေလ်ဂစ်ဆန်အပါအဝင် “ခရစ်တော်၏ပြင်းထန်သော ဝေဒနာခံစားခြင်း “ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းနှင့် ပုံတူကားချပ်သည် တိကျတူညီသော ဝေဒနာခံစားခြင်းကို တစ်ထစ်ချ ရေးဆွဲနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါ။
စကောဖီးလ် ကျမ်းစာ၌ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်တွင်၊ “တိကျစွာ ရေးသားဖော်ပြသည်မှာ၊ လူသား ခန္ဓာကိုယ် သည် ရုပ်ဆင်းမလှ ပျက်စီးယိုယွင်း နေသဖြင့်လူသားနှင့် မတူအောင် အကျဉ်းတန် အရုပ်ဆိုးနေ၏။ လူသားမဆန်တော့ပါ။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းအကြောင်း ရှင်မဿဲ ၂၆၌ ဖော်ပြထားပါသည်” ၁၇၁၂-၁၇၆၈ ခုနှစ်၊ ယောသပ်ဟတ်သီကုံးသော ဓမ္မသီချင်းနားထောင်ကြပါစို့။
(၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ ယောသပ်ဟတ် သီကုံးသော ကြီးမားမေတ္တာ ဓမ္မသီချင်းကို
ညည့်နက် သန်းခေါင်း သံလွင်တောင်ဝယ် ဟူသောသံစဉ်ဖြင့်သီဆိုပါသည်။
အသွေးတော်စီးကျ ပြင်းစွာဝေဒနာ အဘယ်ကြောင့်နည်း
(၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ ယောဆက်ဟတ် သီကုံးသော ဂေသရှေမာန်ဥယှာဉ်၊ (ရွှေသံလွင် ပုံနှိပ်တိုက် ဓမ္မသီချင်းကို၊
ညန့်နက်သန်းခေါင်း သံလွင်တောင်ဝယ် ဟူသော ဓမ္မသီချင်းဖြင့် သီဆိုသည်။
အိုကယ်တင်ရှင်၊ “ကိုယ်တော်သည် ရုပ်ဆင်းပျက်လျှက် လူသားနှင့်မတူအောင် ပျက်စီးယိုယွင်း အကျဉ်းတန် အရုပ်ဆိုးခဲ့ရပါသနည်း?၎င်းကို ဟေရှာယ ၅၃း၁၂ ၌ဖြေကြားထားပါသည်။ “လူများတို့၏ အပြစ်ကို ဆောင်၍ မတရားသော သူတို့အဖို့ တောင်းပန်သောကြောင့်” (ဟေရှာ ၅၃း၁၂)။ ဤသည် လူအများတို့အဖို့ မိမိကိုယ်ကို အပူဇော်ခံ၍ ဖြစ်သည်။ ကားတိုင်ထက် သင့်အပြစ်တွက် သေလုမတက် ဝေဒနာခံယူပြီး သင့်နေရာ၌ အစားဝင်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်! ဤသို့ဖြင့် ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကို ဆောင်ရွှက်ခဲ့ပါသည်။ သင့်အပြစ်အဖိုးအခအတွက် ခရစ်တော်အသေခံယူ ခြင်းဖြစ်သည်။
၃။ တတိယ၊ ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းအမှုသည် လူသားတို့အဖို့ အကျိုးတက်ရောက်နေသည် ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး၊ မတ်တပ်ရပ်လျှက် ဟေရှာယ ၅၂း၁၅ကို အသံကျယ်ကျယ်နှင့်ဖတ်ကြားကြပါစို့!
“ထိုအတူ သူသည် အများသောလူမျိုးတို့ကို သန့်ရှင်းစေလိမ့်မည်။ ရှေ့တော်၌ ရှင်ဘုရင်တို့သည် မိမိတို့နုတ်ကို ပိတ်၍ နေရကြလိမ့်မည်။ သူတပါးမပြဘူးသော အရာကို သူတို့သည် မြင်ကြ လိမ့်မည်။ မကြားဖူးသော အရာကို လည်း နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဟေရှာ ၅၂း၁၅)။
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ၊ ဒေါက်တာယန်းက ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သတ်၍ ခရစ်တော်၏ အသေခံပူဇော် ခြင်းနှင့် ဝေဒနာကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ပရောဖက်ကြီးက ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ခြင်းနှင့် စပ်လှဉ်း၍ ဖော်ပြခဲ့ ပါသည်။ “ထိုသူသည် အများသောလူတို့ကို သန့်ရှင်းစေလိမ့်မည်” ထိုသူသည် ရုပ်ဆင်းပျက်လျှက် ရှိလိမ့်မည်၊ အစေခံကျွန်သည် အခြားသောသူတို့အား သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်အမှန်တကယ် ရုပ်ဆင်းပျက်ခြင်းသည် လူမျိုးတကာတို့အဖို့ ကိုယ်တော်တိုင် သန့်ရှင်းခြင်းကို လူဆောင်လာပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကြိယာဖြစ်သော ဖျန်းခြင်းဟူသည် ရေ(သို့) အသွေးဖြင် သန့်ရှင်းအောင် ဖျန်းခြင်းဖြစ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သော ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ဖြူစင်ခြင်းကို အခြားသူတို့အဖို့ ယူဆောင်လာခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကို ကိုယ်တော် ကိုယ်တိုင် ခံယူခြင်းသည် ခရစ်တော်ဘုရားအား အမှီသဟဲပြုသော သူတို့အဖို့ သန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်း သဘောအသစ်ကို ပြောင်းလဲပေးစွမ်းရန်ဖြစ်သည်။ (ibid., pp. 338-339).
ထိုသို့သော ပရောဖက်ပြုချက်တို့ကို ခရစ်တော်ပြည့်စုံပေးခြင်းအားဖြင့်၊ ယုဒဘာသာကို ချိုးဖျက်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘာသာတရားတစ်ခုကို ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပထမရာစုနှစ်များတွင်၊ များစွာသော လူတို့သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို လူမျိုးတကာအား ပြောကြားခဲ့သည်။ လူများစွာတို့ သည်လည်း ခရစ်တော်၏အသွေးတော်တန်ခိုးဖြင့် သန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်း အသက်တာလျှောက်လှမ်းခဲ့ကြ သည်။ ဒေါက်တာယန်းပြောကြားသည်မှာ၊ “ကိုယ်တော်ကို မျော်ကြည့်သောသူတို့သည် အသက်တာဘ၀ ပြောင်းလဲခြင်း ခံစားကြရသည်” ဟုဆိုသည်။ သို့ပါသော်လည်း တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီး၌ရှိ ဘုရားခံများအား လုံးတော့ ယုံကြည်သူဖြစ်မလာကြပါ၊ သို့တိုင်အောင်၊ အများတို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ တိတ်တဆိတ် ဝင်လာကြသည်”နုတ်ပိတ်” ခရစ်ယာန်များ၊ သာမန်ခရစ်ယာန်များ ဖြစ်လာကြ၏။ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ကိုယ်တော်အား ဆန့်ကျင်ပြောဆိုခြင်း မပြုကြပေ။ ဘုရင်မ ဧလိဇဘက် IIပင်လျှင်၊ ဝက်စ်မင်တာ အက်ဘေး၌ ဝတ်ပြုခြင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကိုယ်တော်အား ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်း ဘုရင်ခံများ အရှေ့တိုင်းဘုရင်ခံများလည်း ကိုယ်တော်အား ကိုးကွယ်ခဲ့ကြ၏။ ဘရင်မပစ်တိုးရီးယား သည် ကိုယ်တော်အား ကိုးကွယ်ခဲ့ကြ၏။ ဘုရင်မ ပစ်တိုးရီးယားသည် ကိုယ်တော်အား ကိုးကွယ်ခြင်းကို အစဉ်ပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဘုရင်၊ ကျွန်မတင်တိုင်သည်လည်း ကနဦး၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ခဲ့ သူဖြစ်သည်။
“ထို့အတူသူသည် အများသောလူမျိုးတို့ကို သန့်ရှင်းစေလိမ့်မည်၊ ရှေ့တော်၌ ဘုရင်တို့သည် မိမိတို့နုတ်ကို ပိတ်၍ နေရကြလိမ့်မည်။ သူတပါးမပြဘူးသော အရာကို သူတို့သည် မြင်ကြ လိမ့်မည်။ မကြားဘူးသော အရာကိုလည်း နားလည်ကြလိမ့်မည်” (ဟေရှာ ၅၂း၁၅)။
ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည်၊ ပရောဖက်တို့ကြိုတင် ဟောကြားထားသည့်အတိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ ပျံ့နှံ့ခဲ့ရပါသည်။
“ထို့အတူ သူသည် အများသောလူမျိုးတို့ကို သန့်ရှင်းစေလိမ့်မည်”
အမေရိကန်နိုင်ငံ၌၊ သမ္မတတို့သည်လည်း ခရစ်ယာန်နာမည်ကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး၊ ကိုယ်တော် ရှေ့တော်၌ နုတ်ပိတ်လျှက်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုအံ့ဖွယ်သော ကြိုတင်ဟောချက်တို့သည် ဥရောပတစ်ခွင်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ ကိုသာ ပြောနေခြင်းတော့မဟုတ်ပါ။ အနောက်နိုင်ငံ၌ရှိ အသင်းတော်များတို့သည် “လစ်ဘရယ်လ်ဝါဒ” ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆုတ်ယုတ်လာပြီး၊ သမ္မာကျမ်းစာကို တိုက်ခိုက်လာပါသည်။ ဖန်းနီး၏ဝါဒ နောက်သို့ ၎င်းလိုက်ကြသည်။ “အပေါ်ယံ ခရစ်ယာန်ဝါဒ” နောက်သို့လိုက်၍ လမ်းလွဲကုန်ကြသည်။ တတိယနိုင်ငံများ၌ရှိ အသင်းတော်များအားနည်းခြင်းရှိပြီး၊ တဖန်နိုးထလာကြသည်။ ဖေါက်ပြန်ခြင်းနှင့် အသင်းတော်အားနည်းခြင်းသည် ယနေ့တိုင်အနောက်တိုင်းများ၌ လွမ်းခြုံထားဆဲဖြစ်သည်။ ယနေ့တရုတ် နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ၌ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားမြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား အစဉ်ဝမ်းမြောက်လျှက်ရှိသည်! ထိုသူတို့သည် အစဉ်ညှဉ်းဆဲ ခြင်းကို ခံရကြသည်။ ၂ရာစုနှစ်တုန်းက ဆက်ဟူးလျှန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “မာတုရတို့၏ အသွေးမျိုးစေံ အသင်းတော်” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ ယနေ့တတိယနိုင်ငံများ၌ ထိုသို့တွေ့ရ ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အခြားသောအနောက်တိုင်း မျိုးဆက်သစ်တို့သည် ခရစ်ယာန်နောက်ခံ သမိုင်းမှ နောက်သို့ဆုတ်ယုတ်လျှက် ရှိနေပေပြီ။ စပါဂျန်ပြောကြားသည့်အတိုင်း၊ နတ်ဝိညာဉ်ခန်းများ ပူးသော အတတ်ပညာများ၌ လေ့ကျက်လျှက် ရှိနေကြသည်ဆို၏။
ယေရှုသည် ဂျူးလူမျိုးတို့ကိုသာ သန့်ရှင်းမည်မဟုတ်ဘဲ၊ တပါးအမျိုးသားတို့အားလည်း သန့်ရှင်းစေ မည်ဖြစ်သည်။ လူမျိုးတကာတို့သည် ကိုယ်တော်၏ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို ကြားနာကြရမည်ဖြစ် သည်။ မြက်ပင်တို့သည် နံနက်အချိန်၌ နှင်းရည်ဖြင့် ရေချိုးသန့်ရှင်းစေသည်။ နည်းတူကိုယ်တော်သည် ဆင်းရူအးကလိမ့်မည်။ အမှောင်သားတို့သည် ဝေးလွင့်ကြပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်ကို ခိုလှုံသောသူတို့သည် နံနက်အလင်းရောင်ရသကဲ့သို့ ကိုယ်တော်၏သွန်သင်ချက်တို့ကို သောက်သုံးကြလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော် သည်လည်း နုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် လူမျိုးတကာတို့အား သန့်ရှင်းစေမည်ဖြစ်သည် (ibid., p. 248).
“တပါးအမျိုးတို့၏ စည်းစိမ်သည် သင့်လက်သို့ရောက်လိမ့်မည်” (ဟေရှာ ၆ဝး၅)။
“ကြည့်ရှုလော့။ ဤသူတို့သည် ဝေးသောအရပ်မှ လာကြလိမ့်မည်။ ကြည့်ရှုလော့။ သူတို့သည် မြောက်မျက်နှာနှင့် အနောက်မျက်နှာမှ၎င်း၊ ထိုသူတို့သည်လည်း သိနိမ်ပြည်မှ၎င်း လာကြလိမ့် မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ဟေရှာ ၄၉း၁၂)။
နှစ်ရာချီကတည်းက၊ စပါဂျန်၏ “ပရောဖက်စကားသည်” ယနေ့ထိ အမှန်တရားဖြစ်နေဆဲပင်ဖြစ် သည်။ အလွန်အင်မတန် ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်! အာမင်!
ထိုကတိရှိသမျှ အားလုံးမပြည့်စုံသေးပါ။ ပြည့်စုံအုံးမည်၊ ထာ၀ရဘုရား ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် မိန့်မြွတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယကလည်း ထို့အတူဟောကြားခဲ့သည်၊
တရုတ်နိုင်ငံသို့၊ သာသနာပြုစေလွတ်ခြင်းခံရသော ဟတ်ဆန်တေလာ ပြောကြားသည်မှာ၊ ထို့အတူပင် လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်! တရုတ်ပြည်သူ သမ္မတနိုင်ငံ၌ နာရီနှင့် အမျှ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါသည်။ ဝေးသောအရပ်ဒေသက သူတို့နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြရ၏!
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေ့စဉ်ကလေးသုံးထောင်သည် အကူအညီမဲ့၊ ရက်စက်စွာဖျက်ချခြင်းခံခဲ့ရ သည်။ သို့သော် ဝေးသောအရပ်ဒေသတွင်၊ ခရစ်တော်သည် ကြီးထွားလာ၏။ အောင်မြင်လျှက် ရှိ၏! ဘုရားသခင်သည် ထိုသူတို့အား များစွာသောလူသစ်များကို ပေးတော်မူ၏! သာ၍ခရစ်တော်ကို သိခွင့်ရ သောအခွင့်ကို ဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၏။ နာမတော်ကြောင့် ညှင်းဆဲခြင်းခံရသော သူတို့အား ကိုယ်တော် ရူအးကလာသောအခါ အောင်မြင်ခြင်း အခွင့်ပေးသနားတော်မူမည် ဖြစ်သည်!
ခရစ်တော်ကို သင fသိပါသလား? ဟူ၍ သင hfအားမေးလိုပါသည်။ သင fhအပြစ်ငရဲမှ ကယ်ချွတ် ပေးသော ကိုယ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မျော်ကြည့်ပါ။ သင့် အဖို့ပင်ဖြစ်သည်! သင့်အပြစ်ကို သခင့်အသွေး အားဖြင့် ဆေးကြောပြီးဖြစ်ကြောင့် ကောင်းကင်ဘုံမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြီလား? တလောကလုံး၏ အပြစ်ကို ဆောင်ယူသွားသော သိုးသငယ်၏အသွေးတော်ဖြင့် သင့်အပြစ်ဆေးကြော ပြီးပြီလား? အကယ်၍အပြစ်ဆေးကြောခြင်း မပြုသေးပါက၊ “နုတ်ပိတ်” ၍ သခင့်မျက်မှောက်တော်သို့ ရူအးကလာပြီး ယေရှုကိုမိမိ၏အသက်သခင်အဖြစ် လက်ခံပါမည်လား? ထိုသို့ သင်လုပ်ဆောင်ပါမည်လား?
ကျေးဇူးပြု၍ သီချင်းနံပါတ် ခုနှစ်ကို သီဆိုကြပါစို့။
- လောကကီလူသား အပြစ်ရှိသမျှ ကယ်တင်ရှင်ပေးဆပ်
လျှော်တေအဝတ်ဝတ်ဆင်၊ အပြစ်သားတို့အဖို့ အသေခံ
- ပြင်းထန်သော ဝေဒနာခံစား ငိုကြွေးလျှက် ကျွန်ုပ်အတွက် ဆုချွေ
ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အား ချစ်သနား ကားတိုင်ထက် အသေခံရှာ
-အို! အံ့ဖွယ်မေတ္တာရှင်! နုတ်မြွတ်မမှီအောင်ကြီးမား
(၁၇၅၉၊ ဝီလျှီ၊ ဝိလျှံသီကုံးသော “မေတ္တာဂရုဏာ” ဓမ္မသီချင်းကို ဘုန်းတော်
ပလင်ဟူသော သံစဉ်ဖြင့် သီဆိုသည်)။
အကယ်၍ သင်သည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လိုသောငှါ၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက၊ အနောက် ဘက်ဆွေးနွေး ခန်းဆီသို့ လှမ်းလာခဲ့ပါ။ ဒေါက်တာ ကေကန်မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးပါမည်။ ယခုပင် လှမ်းလာခဲ့ကြပါ။ ထိုအခန်းဆီသို့ ရူအးကလာမည့် သူတို့အဖို့၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဒေါက်တာချန် ဆုတောင်း ပေးပါ။ အာမင်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ အေဘယ်လ် ပရုန်းဟုန်းမှ ရှင်မဿဲ ၂၇း၂၆-၃၆ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၇၈၇ ဓျွငစစသညဒျ)၏အကောင်းဆုံး
ရွှေးချယ်ထားသော “ယုံကြည်ခြင်းတိုက်မြစ်ကျူး” ကို သီဆိုပေးပါသည်။
“ကြည့်ရှုသော။ ငါ့ကျွန်ုပ်သည် အမှုဆောင်၍ အောင်လိမ့်မည်။ ချီးမြှင့်ခြင်းသို့ ရောက်၍ အထွက်အမြက် ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူသည် လူမဟုတ်သကဲ့သို့ မျက်နှာပျက်ခြင်း၊ လူသားမဟုတ်သကဲ့သို့ အဆင်းအသေရေ ပျက်ခြင်းရှိသည်ကို အများသောသူတို့သည် အံ့ဩမိန်းမောကြသည်ဖြစ်၍၊ ထို့အတူသူသည် အများသော သူတို့ကို သန့်ရှင်းစေလိမ့်မည်။ ရှေ့တော်၌ ရှင်ဘုရင်တို့သည် မိမိတိုနုတ်ကို ပိတ်၍ နေရကြလိမ့်မည်။ သူတပါးမပြဘူးသော အရာကို သူတို့သည် မြင်ရကြလိမ့်မည်။ မကြားဘူးသော အရာကိုလည်း နားလည် ကြလိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၂း၁၃-၁၅)။
၁။ရညဘျစးရညဘျစးပထမ၊ ခရစ်တော်ည် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ဆောင်သူ ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါ သည်။
(ဟေရှာယ ၅၂း၁၃)၊ (ပိလိပ္ပိ ၂း၇၊ ၂း၉)၊ (တမန်တော် ၂း၃၂-၃၃)
၂။ရညဘျစးရညဘျစးဒုတိယ၊ ခရစ်တော်သည် အပြစ်အတွက် မိမိကိုယ်ကို အပူဇော်ခံသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ ရပါသည်။
(ဟေရှာယ ၅၂း၁၄)၊ (လုကာ ၂၂း၄၄)၊ (ဟေရှာယ ၅ဝး၆)၊ (လုကာ ၂၂း၆၄)၊ (မာကု ၁၅း၁၅) ယောဟန် ၁၉း၁-၃)၊ (ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)၊
၃။ရညဘျစးရညဘျစးတတိယ၊ ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းအမှုသည် လူသားတို့အဖို့ အကျိုးတက်ရောက်နေသည် ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ (ဟေရှာယ ၅၂း၁၅၊ ၆ဝး၃၊ ၅၊ ၄၉း၁၂)။